ပို့စ်တင်ချိန် - 5/19/2014 04:48:00 PM
1. Facebook3hours ago 18-5-2014
ဆရာ သမီးသိချင်တာလေးရှိလို့ မေးခွင့်ပြုပါ။ သမီးအမေက အသက် ၅၈ နှစ်ရှိပါပြီ။ အဲဒါ ခုတလောအမေက ပစ္စစည်းတစ်ခုခုကိုကိုင်ရင် လက်တွေတုန်နေပါတယ်။ သမီးလည်း အဝေးမှာနေတာဆိုတော့ ခုမှသတိထားမိလို့ မေးကြည့်တော၊ လက်တုန်တာ့ ၄ လလောက်ရှိပါပြီတဲ့။ အဲလိုလက်တုန်တာ အသက်တော်တော်ကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တာပဲ မြင်ဘူးလို့ပါ။ ဘာဖြစ်တာလဲမသိလို့ သမီးစိတ်ပူလို့ပါ။ သမီးကိုဆက်ဆက်ပြန်ဖြေပေးပါဦးနော်။ တုန်တဲ့ဘက်က ညာလက်ပါရှင်။
2. Mon, Apr 16, 2012 at 3:49 PM